Alaska ụgbọ elu na-ebido nkwekọrịta nkwekọrịta nzuzo na Qatar Airways
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Qatar » Alaska ụgbọ elu na-ebido nkwekọrịta nkwekọrịta nzuzo na Qatar Airways
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Malite na July 1, nkwekọrịta ahụ na-enye ndị njem na Qatar Airways ohere itinye akwụkwọ na njem ma nwee ike ijikọta karịa ụzọ 150 na netwọkụ Alaska.
Alaska bidoro mmekorita ya na Qatar Airways na Disemba 15, 2020, nwere ikike maka ndị otu Mileage Plan anyị ị nweta ọtụtụ kilomita na ụgbọ elu Qatar Airways.
Na Machị 31, 2021, Alaska sonyeere oneworld ma gbasaa mmekorita ya na Qatar Airways.
N'ime ọnwa ndị na-abịanụ, ndị ọbịa nke Alaska ga-enwe ike itinye akwụkwọ njem na ụgbọ elu Qatar Airways n'etiti US na Qatar na gafere.
As Alaska Airlines na-agbasawanye mmekọrịta ya na ndị mmekọ ụwa anyị, anyị ji nganga kwupụta taa mwepụta nke nkwekọrịta nkwekọrịta codeshare na Qatar Airways, onye otu onye otu njikọ ahụ, nke na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti ụgbọ elu abụọ ahụ dịkwuo ike ma na-enye ndị njem ohere dị egwu ma dị mma.
Malite na July 1, nkwekọrịta ahụ na-enye ndị njem ohere Qatar Airways ịdebanye akwụkwọ na ijikọta n'ụzọ karịrị ụzọ 150 na netwọkụ Alaska niile. Na West Coast, Qatar Airways nwere ọrụ na-enweghị nkwụsị nke jikọtara isi ụlọ ya na Doha na atọ nke isi ọnụ ụzọ ámá Alaska - Los Angeles na ụgbọ elu ugboro abụọ kwa ụbọchị, na ụgbọ elu kwa ụbọchị na San Francisco na Seattle - na-enye ohere maka njikọta enweghị ntụpọ.
Ben Minicucci, onye isi Alaska Air Group kwuru, "Obi dị anyị ụtọ na anyị so na mmekọrịta a na Qatar Airways, otu n'ime ọdụ ụgbọ elu kacha elu n'ụwa." “Ka njem ụgbọ elu mba ofesi na-amalite, ọ dị mkpa inye ndị ọbịa anyị njem njem dị mfe karị, nke ga-adaba adaba iji pụọ ma hụ ebe ndị dị anya ọzọ. Flightsgbọ elu Qatar Airways si ụgbọ elu anyị na-akwụsịghị akwụsị site na ngalaba anyị dị na Seattle, San Francisco na Los Angeles gaa Doha na ebe ndị ọzọ na-enye ndị ọbịa anyị nnukwu ohere ịga leta mba ọ bụla ha chọrọ.
"Anyị nwere obi ụtọ ịkwalite mmekọrịta azụmahịa anyị na Alaska Airlines ma anyị nabatara onye ọhụụ kachasị ọhụrụ nke njikọ ụwawor na ndepụta nke ndị mmekọ Qatar Airways," ka Qatar Airways Group Chief Executive, bụ Mazị Akbar Al Baker kwuru. "Nkwekọrịta a, yana mmekọrịta anyị na-eme ugbu a, ga-enyere aka ịme ka ọnụnọ anyị dị na mpaghara ahụ wee nye ndị njem Qatar Airways na-agagharị na site na ọnụ ụzọ ámá 12 US anyị nwere ohere ịnweta netwọk zuru oke nke njikọ na-enweghị ntụpọ na United States."
Alaska bidoro mmekorita ya na Qatar Airways na Disemba 15, 2020, nwere ikike maka ndị otu Mileage Plan anyị ị nweta ọtụtụ kilomita na ụgbọ elu Qatar Airways. Na Machị 31, 2021, Alaska sonyeere oneworld ma gbasaa mmekorita ya na Qatar Airways iji nye ndị uru dị elu, gụnyere ịhọrọ oche oche; nlebanye anya, nchekwa na ịbanye; ohere ezumike na mbata ibu akpa. Qatar Airways abụwo onye otu ụwa kemgbe 2013.
N'ime ọnwa ndị na-abịanụ, ndị ọbịa nke Alaska ga-enwe ike ide akwụkwọ njem na ụgbọ elu Qatar Airways n'etiti US na Qatar na gafere ebe kachasị amasị ha n'Africa, Middle East na South Asia.
Kedu otu COVID si metụta France njem na njem nleta na 2020
Atkins Kroll na -esonye na Mmemme Nkwa Håfa Adai
Norway kwụsịrị njedebe COVID-19 niile, laghachi na ...
Turkish lira na-ada n'ike n'ike megide US ...
Ụgbọ oloko na -agbakọta na Tunisia na -apụ na 30 ma ọ bụ karịa merụrụ ahụ
Njem nlegharị anya Hawaii: Mmefu ndị ọbịa abatala Aloha State
IOC: Egwuregwu Olimpik Oge Ochie nke 2032 ga-anabata ya ...
Ndị ụlọ ọrụ na -eme njem na -eme ngagharị iwe: Minista njem nlegharị anya nke Italytali ...
Otu esi eleta Saudi Arabia site na UAE, South Africa ...
Carnival Corp. Ugbu a iziga Jamaica 110
South African Airways ekwuputala onye isi ọrụ nwa oge
Hollywood Star Jane Powell na Golden Age nke ihe nkiri ...
Jiri Ozi Olileanya rịgoro n'Ugwu Kilimanjaro
Ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ na-eme: Enweghị mmetụta ọ bụla!
Thailand Koh Samui na -emezigharị ụkpụrụ mbata ...
France na -ahazi ụgbọ elu mgbapụ si Kabul na Paris…
Saint Lucia na -eme ememe ịmalitegharị nke Canada ...
Europe ruo Eshia: Bahrain nwere oke ikuku na-efe efe ngwa ngwa ...
Ijikọta njem na ịrụ ọrụ n'ime ime bụ ihe na -eto eto